बच्चाहरु को मोटरसाइकिहरु
आज व्यावहारिक रूपमा कुनै पनि शहरमा, संस्कृतिको पार्कहरूमा त्यहाँका बालबालिकाका कारहरु र मोटरसाइकलहरू को भाडा भनिन्छ। बच्चा धेरै पटक, प्रविधिको यस्तो चमत्कार देख्न र परीक्षण गरेपछि, उसको आमाबाबुले उसलाई त्यहि खरिद गर्न सोध्नु हुन्छ। त्यसोभए प्रश्नले बालबालिकाको मोटरसाइकल सेटको सही तरिकाले कसरी उठाउँछ जुन एक लामो समयसम्म हुने छान्नेछ र तोड्ने छैन।
बच्चाहरूको लागि मोटरसाइकलका मुख्य प्रकारहरू
आजको लागि, यस्ता प्रकारको बालबालिकाहरूको मोटर यातायातको वर्गीकरण ठूलो छ। यसकारण आमाबाबुले छनौट गर्ने हानिमा छन्। सुरु गर्न को लागी, तपाईंलाई कस्तो किसिमको मोटरसाइकल बच्चा चाहिन्छ भनेर निर्णय गर्न आवश्यक छ।
मूल्यको लागि सबैभन्दा लोकप्रिय र किफायती बच्चाको मोटरसाइकल-व्हीलचेयर हो। यसको निर्माण समान समान चक्र कारहरू जस्तै छ र धेरै सरल छ, किनभने यसको कुनै पनि घटक र असेंबलीहरू छैन। एक मोटरसाइकल बस खुट्टा आफ्नो खुट्टा संग मैदान को धक्का गरेर गति मा राखिएको छ। केही अवस्थामा, यो बच्चाको क्यारियरको लागि एक विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, जब बच्चा पहिले नै बढेको छ, र सामान्य स्ट्रोलरमा बस्न नदिनुहोस्।
साथै ठूला बच्चाहरुका लागि त्यहाँ बच्चाहरु को मोटरसाइकलहरू पेडलहरू छन्, एक समान डिजाइन भएको छ, बाहेक बच्चाले आफ्नै आमाको मद्दत बिना आफूलाई यो सार्न सक्छ।
उपलब्धतामा अर्को ब्याट्रि (बिजुली) बच्चाको मोटरबाइक हो। यो शीर्षकबाट स्पष्ट रूपमा, यसको डिजाइन को आधार बिजुली ड्राइव हो, जसले मोटरसाइकल सार्दछ। यस मामला मा शक्ति को स्रोत एक विशेष बैटरी छ। यस्तो यन्त्रको प्रत्यक्ष सीधा यसको क्षमतामा निर्भर गर्दछ।
तेस्रो उपलब्धतामा बालबालिकाको पेट्रोल मोटरसाइकलहरू छन्। यो प्रकारको यातायात आन्तरिक दहन इन्जिनको साथ पूर्ण आकारको मोटरसाइकलको पूर्ण प्रतिलिपि हो। यस प्रविधिलाई केही प्रशिक्षण र सेवा चाहिन्छ। छोराछोरीले एक बच्चाको क्रस-देश मोटरसाइकलमा स्वतन्त्र रूपमा जान्न सिक्नु भन्दा पहिले, तपाईलाई उनीसँग एक भन्दा बढी पाठ खर्च गर्न आवश्यक छ। यस अवस्थामा, बच्चाको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिइन्छ।
कसरी सही बालबालिकाको मोटरसाइकल छान्नु हुन्छ?
तपाइँ यस प्रकारका उपकरणहरू खरीद गर्नु अघि, तपाइँको बच्चाको लागि उपरोक्त डिजाइनहरू कुन उपयुक्त छ भनेर निर्धारण गर्नुहोस्। यदि यो एक साधारण मोटरसाइकल-बगैचा हो भने, यसको खरिदको साथ, प्लास्टिक को गुणवत्ता को लागी विशेष ध्यान दिइन्छ। यो पनि राम्रो छ यदि पाङ्ग्रा बीयरिंगहरूमा हो - यी मोडेलहरू लामो समयसम्म र ब्रेक गर्दैनन्।
यदि आमाबाबुले आफ्नो बच्चालाई एक ब्याट्री मोटरसाइकल दिन चाहानुहुन्छ भने, जब तपाइँ यसलाई खरीद गर्नुहुन्छ, तपाइँलाई पहिले ब्याट्रिको क्षमतामा ध्यान दिनुपर्छ - यो यो प्यारामिटर हो जसले प्रत्यक्ष रूपमा एक शुल्कबाट यसको प्रयोगको अवधिलाई असर गर्छ। साथै, तपाइँलाई गति समायोजन छ कि छैन भनेर ध्यान दिन आवश्यक छ। यस अवस्थामा, आमाबाबुले आफैंलाई सुरक्षाको लागि, निश्चित गतिमा मोटरसाइकल सेट गर्न सक्दछ।
पेट्रोल मिनिबिडहरू खरीद गर्न केही आमाबाबुले हल गरे। मूलतया, यो प्रकारको यातायात ती बच्चाहरूको स्वामित्वमा छ जुन पिताजी छ, र कहिलेकाहिँ आमा बाइकहरू। जब तपाइँ यसलाई खरिद गर्नुहुन्छ, तपाईं यस्तो प्रकारको प्रविधिलाई बुझ्ने व्यक्तिको सेवा बिना गर्न सक्नुहुन्न। यस्ता बालबालिकाको मोटरसाइकल किन्न, तपाईलाई सम्झनु पर्दछ कि यो सामान्य, ठूलो मोटरसाइकलको रूपमा त्यहि मर्मतको आवश्यकता पर्दछ। साथै, यस्ता उपकरणहरूको लागि तपाईंलाई गेराजमा एक ठाउँ चाहिन्छ।
त्यसकारण, तपाईंको प्रिय बच्चा किनेको कस्तो प्रकारको मोटरसाइकल बच्चाको प्राथमिकतामा आधारित आमाबाबुले मात्र निर्णय गरेको छ। यद्यपि, कुनै पनि अवस्थामा, बच्चाको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
बच्चा "शि" बोल्न कसरी सिकाउनुहुन्छ?
माफियामा खेलको नियम
Preschoolers को लागि Mnemonics
जीवनको पहिलो वर्षको संकट
सुपरहीरोहरूको बारेमा कार्टून
बालबालिकाको लागि सर्भरको ओभरलेन्स
विद्यालयको लागि सामाजिक विज्ञान
सोन किम कार्डशियन र केनी वेस्ट
बच्चाहरुसँग मेगन फक्स
कागजको बुकमार्क कसरी गर्ने?
बच्चाहरु को लागि कक्षा 3-4 वर्ष पुरानो
आफ्नो हातले पेंसिल धारक
पसीनाबाट दाँतलाई कसरी धोएर?
गर्भवती महिलाहरु को लागि लेगिंग
दाँतको सफाई - मौखिक स्वच्छताका लागि 8 तरिका
आदम लेविनले आफ्नी पत्नी र छोरीलाई हमला गर्ने आरोप लगाए
क्यापल होटल - फंतासी देखि वास्तविकता मा
यात्रा बैग मा पहिए
माछा कहाँ जान्छ?
बिरालोहरु मा क्रेम्पन - लक्षण
जीनमेन्ट्रिटिजसँग नाकमा छोड्छ
ओटोमोबाइल - फैशन वसन्त 2015
गर्भवती आमाको झील
सानो बेडरूम कसरी लैजानुहुन्छ?
प्रायद्वीप - प्रजाति
बेनसेक्सले कसरी हवाईमा पुग्छ भनेर देखाए
सबै प्रकारका भाइरस र सम्भावित जटिलताहरु को इन्फ्लुएंजा संकेत को लक्षण